Dhageyso Wareysiga Abuu Qudaama Oo Ka Mid Ah Raggii Fuliyay Weerarkii SYL Iyo Madaxtooyada. – Calamada.com
Dhageyso Wareysiga Abuu Qudaama Oo Ka Mid Ah Raggii Fuliyay Weerarkii SYL Iyo Madaxtooyada.
calamada July 19, 2018 1 min read
Cabdi Samad Xuseen Aadan oo ku magacdheer Khudaama, waa amiirka hogaaminayey majmuucadii inqimaasiyiinta ee weerar ku halyeeynimo ku qaaday xarumaha murtadiinta ee magaalad Muqdisho sabtidii la soo dhaafay.
Geesigan ayaa ka dhashay beesha Mareexaan gaar ahaan jufada Horaasame, wuxuuna ka soo jeedaa degmada Ceelwaaq ee wilaayada gedo ee dhacda koonfur-galbeed Soomaaliya.
Wuxuu ahaa wiil da’ yar oo 22 sano jir ah, kuna tilmaamaanaa karti iyo geesinimo, go’aan iyo dul-qaad.
Wuxuu ka tirsanaa ciidamada fursaanta ee wilaayada Islaamiga Gedo ka hor inta uusan ku soo biirin guutada istish-haadiyiinta.
Mudadii uu taagnaa saaxaatka jihaadka wuxuu ka qeybgalay duullaano iyo howlgalo kala duwan oo ay qaadeen Mujaahidiinta kuwaas oo lagu qaaday cadowga Allaah.
Asxaabta uu ku lahaa maktabka istish-haadiyiinta oo u garanayey “Timo” waxay ku sifeeyeen inuu ahaa qof u dabacsan walaalihiisa kuna ad-adag cadowga Allaah. Wuxuu ahaa dadka ku ad-adag caqiidada Al-Walaa wal Baraa, Isagoo xiriirin jiray cid waliba oo xiriirisay Allaah iyo rasuulkiisa, sidoo kalena jaray cid waliba oo ka xuub siibatay diinta Islaamka.
Howlgalkii uu hogaaminayey ee sabtidii la soo dhaafay lagu qaaday xarumaha murtadiintana wuxuu ku soo bandhigay karti iyo geesinimo fariid ah, waxaana isaga iyo halyeeyadii uu hor kacayey ay halkaas ku gumaadeen murtadiin badan oo u badnaa ilaalada Madaxtooyada.
Walaalkeen Cabdi Samad wuxuu Idaacadda Islaamiga Andalus siiyey wareysi uu kaga warbixinayo waxa dhaliyey inuu ku soo biiro Jihaadka iyo waxyaabaha ku dhiirageliyey inuu ku soo biiro guutada istish-haadiyiinta.
Halkan Ka Dhageyso Wareysiga Al-istish-haadi Abuu Khudaamah.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 06-11-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 07-11-1439 Hijri.
2 thoughts on “Dhageyso Wareysiga Abuu Qudaama Oo Ka Mid Ah Raggii Fuliyay Weerarkii SYL Iyo Madaxtooyada.”
ilaaheey ha u naxariist walaalahaas mujaahidiinta ee geesiyaashaa dhiigoodona u daadiyey ineey kalimida alaah kor u noqoto, ilaahoow u naxariiso walaalahaas
Masha allah allah haguleyo musliminta